PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-18 - ‘Liphelile iphupha lam lokuya eYunivesithi’
‘Liphelile iphupha lam lokuya eYunivesithi’
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-18 - IINDABA - PHINDA KULA
KAPA: UKUPHUMELELA ibanga leshumi liphupha laye nawuphina na umntwana ochithe iminyaka elishumi elinesibini esikolweni.
Kungokunje inkala ixinge elityeni kuZikhona Ngamlana onamashumi amabini eminyaka ubudala, ongumfundi webanga leshumi kwisikolo samabanga aphezulu iSophumelela nesizinze kwilokishi iSamora Machel eKapa.
Eli gqiyazana neliqhuba kakuhle kakhulu kwizifundo zalo linengxaki yokungabinaso isatifiketi sokuzalwa. Le ntwazana ihlala kwilokishi yaseSamora.
“Isatifiketi sam sokuzalwa salahleka ngethuba ndingumfundi kumabanga aphantsi. Ukulahleka kwaso kulandela emva kokuba esikolweni endandifunda kuso sacelwa ukuba size nazo nanjengoko sasilungiselela ukubaleka kwezemidlalo esikolweni,” utshilo uNgamlana. Uthi oku akazange akuhoye, wahlala ngaphandle kwesatifiketi sokuzalwa, uthi nto nje yena waqhubeka nesikolo de kulo nyaka abe ukwibanga leshumi, nalapho sifuneka ngakumbi nanjengoko sele beza kuqalisa ukubhala iimviwo zokuphela konyaka.
Kungoku nje uNgamlana akanaso isazisi kuba iSebe leMicimbi yezeKhaya alikwazi kuqhubela phambili nalo mba ukuba afumane isazisi, ngelithi ukuze enzelwe kumele aze nesatifiketi sokuzalwa.
Le meko inzima kuba uZikhona xa ezama ukwenza esinye isatifiketi sokuzalwa akaveli phantsi kwegama labazali bakhe, nangona uyise sele walandulela eli. Kungoku nje kushiyeke unina kuphela uNontobeko Ngamlana, 50. UZikhona uthi kunzima ukuba lo mcimbi bawuqabelise nanjengoko unina ingumntu ophila nokukhubazeka nosebenzisa isitulo esinamavili emva kokuba wahlaselwa sisifo sokugogeka kwamalungu omzimba.
“Into ebangela ukuba ndingakwazi ukuya nomama kwiSebe leMicimbi yezeKhaya ziindleko kuba uhlala ezilalini kwidolophu yakuCentane eMpuma Koloni. UZikhona uthi zange akwazi ukumnceda amagosa eSebe leMicimbi yezeKhaya nanjengoko akhe atyelela kwisikolo sakhe ukuza kwenzela abafundi iziqinisekiso zokuzalwa kwanezazisi. Uthi la magosa amxelela ukuba akaveli phantsi kwegama likanina.
“Endikunqwenelayo kukuba ndifumane isatifiketi sam sokuzalwa, ndizokufumana isazisi, ndikwazi ukubhala iimviwo zam,” utshilo uZikhona.
Uthi iphupha lakhe lokuya eYunivesithi litshabalele kuba akanaso isazisi, oko kubangele ukuba angakwazi ukufaka isicelo sokufunda kumaziko aphakamileyo emfundo enomsila. UZikhona uthi iphupha lakhe kukufundela ukubaligqwetha.
Ophuma kwiSebe leMicimbi yezeKhaya kuZwelonke, uThabo Mokgola, uthi ongumanejala kweli sebe eNtshona Koloni, uza kuthumela igqiza lamagosa ukuba liqhagamshelane nomama kaZikhona ngelizama ukuqhuba uphando ukuze kuqosheliswe lo mcimbi wesatifiketi sokuzalwa sikaZikhona.